အရက်သမားများ၏ အမူအကျင့်များ – ADS Myanmar Blog
အရက်သမား အမှားတစ်ထောင်ဆိုသည့်အတိုင်း အရက်သောက်လာလျင် မှားယွင်းတက်သောအကြောင်းအရာများကို ဗဟုသုတဖြစ်ဖွယ်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
၁။ နှစ်ပင်လိမ်၊ သုံးပင်လိမ်ဖြစ်ခြင်း
ပုံမှန်အားဖြင့် ဘီယာသောက်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊အရက်သောက်နေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် အမျိုးအစားတစ်ခုတည်းကိုပဲ သောက်သင့်ပါတယ်။ မှားယွင်းပြီး နှစ်ပင်လိမ်၊သုံးပင်လိမ်ဖြစ်လျင် ဥသြဆွဲကာ အန်ပါလိမ့်မည်။
၂။ အနီးဆုံးလူကို နမ်းခြင်း
စကားပြောရင်း၊ အရက်သောက်နေရင်းနှင့်ပင် အနီးဆုံးလူကို အချစ်လွန်ပြီး သူငယ်ချင်းကို ဖက်နမ်းတက်ကြပါတယ်။ မူးလာရင် နမ်းတက်တဲ့သူငယ်ချင်းလည်း အများကြီး တွေ့ဖူးပါတယ်။
မူးနေချိန်မှာဆို ရည်းစားဆီပို့တဲ့မက်ဆေ့က အဖေဆီကို ရောက်တာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ “ချစ်တယ် အာဘွားပေးမယ်” လို့ မူးနေချိန်မှာ ပို့လိုက်တဲ့မက်ဆေ့က ရည်းစားဆီမရောက်ဘဲ ကိုယ့်အဖေဆီရောက်သွားရင်တော့ ဖခင်ခမျာ ငါ့သားခြောက်နေပြီလို့ တွေးရင်း ရင်ကျိုးရမှာပဲ။
ပုံမှန်အချိန်မှာ မေ့ပျောက်ထားသော ဝမ်းနည်းစရာခံစားချက်များဟာ မူးလာပြီဆိုလျင် ပေါ်လာတက်ပါတယ်။ ထိုအချိန်ကျမှ ဝမ်းနည်းစရာတွေ တွေးမိပြီး ငိုတော့ သူငယ်ချင်းတွေ အမူးပြေကုန်တာပေါ့။
၅။ ကိုယ်ကြည့်မရတဲ့သူတောင် အရက်ဝိုင်းမှာဆို မိတ်ဆွေဖွဲ့ခြင်း
အရက်သမားတွေဟာ ပုံမှန်အားဖြင့် သိပ်ကြည့်မရဖြစ်နေတက်တဲ့ သူငယ်ချင်းကိုတောင် အရက်ဝိုင်းမှာ ငယ်ပေါင်းကြီးဖော်ပမာ ဆက်ဆံတာတွေ့ဖူးမှာပါ။
အရက်လေး နည်းနည်းဝင်လာပြီဆို အာသွက်လျှာသွက်ဖြစ်ကာ Rapping ရွတ်နေပါတော့တယ်။ မိမိရင်ထဲမှာ ရှိတဲ့အကြောင်းအရာများကို ရင်ဖွင့်တက်ကြပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်ပဲ “ထန်းရေမူး ကျွဲခိုးပေါ်” လို့ စကားပုံရှိလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
၇။ မြူးကြွကာ သီချင်းဆိုတက်ခြင်း
အရည်လေး နည်းနည်းဝင်ပြီဆို အာပေါင်းအာရင်း သန်သန်၊ အဆောင်ရှေ့၊လမ်းထိပ်၊ KTV များကို သွားရောက်ကာ သီချင်းဆိုကြပါတယ်။ မူးလာလျင် ပြုလုပ်တက်သော လူတွေရဲ့အမူအကျင့်များကို ဖော်ပြထားပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတို့ရေ . . . လိုသေးတဲ့အချက်များရှိလျင်လည်း ထပ်ဖြည့်ပေးဦးနော်။
ကဲ . . . . အခုလို အစားအသောက်များကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ Ads.com.mm ပရိသတ်ကြီးအတွက် အစားအသောက်များကို https://www.ads.com.mm/agriculture-food လင့်ခ်အတိုင်း ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – – – – –
အရကျသမား အမှားတဈထောငျဆိုသညျ့အတိုငျး အရကျသောကျလာလငျြ မှားယှငျးတကျသောအကွောငျးအရာမြားကို ဗဟုသုတဖွဈဖှယျဖျောပွလိုကျပါတယျ။
၁။ နှဈပငျလိမျ၊ သုံးပငျလိမျဖွဈခွငျး
ပုံမှနျအားဖွငျ့ ဘီယာသောကျရငျပဲဖွဈဖွဈ၊အရကျသောကျနရေငျပဲဖွဈဖွဈ အမြိုးအစားတဈခုတညျးကိုပဲ သောကျသငျ့ပါတယျ။ မှားယှငျးပွီး နှဈပငျလိမျ၊သုံးပငျလိမျဖွဈလငျြ ဥသွဆှဲကာ အနျပါလိမျ့မညျ။
၂။ အနီးဆုံးလူကို နမျးခွငျး
စကားပွောရငျး၊ အရကျသောကျနရေငျးနှငျ့ပငျ အနီးဆုံးလူကို အခဈြလှနျပွီး သူငယျခငျြးကို ဖကျနမျးတကျကွပါတယျ။ မူးလာရငျ နမျးတကျတဲ့သူငယျခငျြးလညျး အမြားကွီး တှဖေူ့းပါတယျ။
မူးနခြေိနျမှာဆို ရညျးစားဆီပို့တဲ့မကျဆကေ့ အဖဆေီကို ရောကျတာလညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။ “ခဈြတယျ အာဘှားပေးမယျ” လို့ မူးနခြေိနျမှာ ပို့လိုကျတဲ့မကျဆကေ့ ရညျးစားဆီမရောကျဘဲ ကိုယျ့အဖဆေီရောကျသှားရငျတော့ ဖခငျခမြာ ငါ့သားခွောကျနပွေီလို့ တှေးရငျး ရငျကြိုးရမှာပဲ။
ပုံမှနျအခြိနျမှာ မပြေ့ောကျထားသော ဝမျးနညျးစရာခံစားခကျြမြားဟာ မူးလာပွီဆိုလငျြ ပျေါလာတကျပါတယျ။ ထိုအခြိနျကမြှ ဝမျးနညျးစရာတှေ တှေးမိပွီး ငိုတော့ သူငယျခငျြးတှေ အမူးပွကေုနျတာပေါ့။
၅။ ကိုယျကွညျ့မရတဲ့သူတောငျ အရကျဝိုငျးမှာဆို မိတျဆှဖှေဲ့ခွငျး
အရကျသမားတှဟော ပုံမှနျအားဖွငျ့ သိပျကွညျ့မရဖွဈနတေကျတဲ့ သူငယျခငျြးကိုတောငျ အရကျဝိုငျးမှာ ငယျပေါငျးကွီးဖျောပမာ ဆကျဆံတာတှဖေူ့းမှာပါ။
အရကျလေး နညျးနညျးဝငျလာပွီဆို အာသှကျလြှာသှကျဖွဈကာ Rapping ရှတျနပေါတော့တယျ။ မိမိရငျထဲမှာ ရှိတဲ့အကွောငျးအရာမြားကို ရငျဖှငျ့တကျကွပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ပဲ “ထနျးရမေူး ကြှဲခိုးပျေါ” လို့ စကားပုံရှိလာခွငျးဖွဈပါတယျ။
၇။ မွူးကွှကာ သီခငျြးဆိုတကျခွငျး
အရညျလေး နညျးနညျးဝငျပွီဆို အာပေါငျးအာရငျး သနျသနျ၊ အဆောငျရှေ့၊လမျးထိပျ၊ KTV မြားကို သှားရောကျကာ သီခငျြးဆိုကွပါတယျ။ မူးလာလငျြ ပွုလုပျတကျသော လူတှရေဲ့အမူအကငျြ့မြားကို ဖျောပွထားပါတယျ။ သူငယျခငျြးတို့ရေ . . . လိုသေးတဲ့အခကျြမြားရှိလငျြလညျး ထပျဖွညျ့ပေးဦးနျော။
ကဲ . . . . အခုလို အစားအသောကျမြားကို စိတျဝငျစားတဲ့ Ads.com.mm ပရိသတျကွီးအတှကျ အစားအသောကျမြားကို https://www.ads.com.mm/agriculture-food လငျ့ချအတိုငျး ရှာဖှနေိုငျပါတယျ။
Author kyawsoeaungadsPosted on May 22, 2016 May 20, 2016 Categories Other
Previous Previous post: အိမ်အသစ်တစ်လုံးဝယ်မည်ဆိုလျင် လေ့လာသင့်သောအရာများ
Next Next post: Numark Mixdeck Serato DJ